Orinasa mpamokatra siramamy: Mampanantena ny hanokatra indray ny SUCOMA Morondava i Andry Rajoelina
dimanche, 10 novembre 2019 12:39
« Tsy maintsy hosokafantsika ny SUCOMA », hoy ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina raha tonga nitsidika ity orinasa mpamokatra siramamy ao Analaiva – Morondava ity, omaly. Mila handefa « expert » izy hanadihady sy hitondra ny vahaolana teknika rehetra amin’izany.
Mbola nanambara izy fa « azo atao tsara koa ny manokatra orinasa iray hafa, afaka hamokatra siramamy eto Morondava mba hanomezana asa sy hanodinana ny toekarena ary hanatsarana ny sosialy eto amin'ny tanàna manodidina ny SUCOMA eto Morondava ».
Nikatona tamin'ny taona 2014 ny SUCOMA (SUcrerie de COmplant de MAdagascar) na SIRANALA teo aloha, noho ny olana ara-pitantanana. May ny ampahan’ny orinasa, voaroba ny fitaovana noho ny disadisa teo amin’ny mpiasa sy ireo Sinoa mpitantana ny orinasa.
Minisitra samihafa no nifandimby nidina nandamina, sy nampanantena ny hisokafan’io orinasa io indray fa tsy mbola tafarina hatreto.
Vanille: Une 2ème liste des exportateurs
Jirama: Nomena alalana hividy solika, tsy mandalo ny tsenam-barotra, ho an’ireo toeram-pamokarana herinaratra »